लगातार तिन महिना अपनाउनुहोस् यी उपाय, रोकिनेछ कपाल झर्न ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/लगातार तिन महिना अपनाउनुहोस् यी उपाय, रोकिनेछ कपाल झर्न !
प्राय महिलाहरुको चाहना हुन्छ कि आफ्नो कपाल लामो र बाक्लो होस्। तर आजकल, यो इच्छा एक थकित र तनावपूर्ण जीवनमा अधुरोनै रह्छ। धेरै अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि जुन तनावको कारणबाट पनि महिलाहरुको कपाल झर्ने समस्या आउछ । बजारमा पाइने सेम्पु तथा साबुनमा विभिन्न हानिकारक केमिकलका कारण पनि कपाललाई कमजोर बनाउछ। यदि तपाई ड्यामेज कपालबाट आजित हुनुहुन्छ र कपाललाई सुन्दर र लामो बनाउन चाहानुहुन्छ भने घरेलु उपाए प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ। यी तलका गरेलु उपाय तिन महीनासम्म प्रयोग गर्नुहोस्।यसको प्रतिफल देखेर छक्क पर्नुहुनेछ।
प्याजको रसले तपाइको टाउकोलाई सफा राख्न मदत गर्छ। दुई वटा प्याजलाई लिनुहोस् र यसलाई सानो -सानो बनाएर काट्नुहोस् र यसको रस निकाल्नुहोस्। यसलाई आफ्नो कपालमा लगाउनुहोस्। यसलाई ३० मिनेट राख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई मनतातो पानी र सेम्पुले धुनुहोस्। यसो गर्नाले तपाइको कपालमा छिटै परिवर्तन आउछ।